नेपालको सवारी दुर्घटना कम गराउने एनआरएनएको अभियान सफल बनाउँछौं- थर्क सेन
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नेपालमा बढ्दै गएको सवारी दुर्घटना, ट्राफिक जाम र सवारीबाट निस्कने प्रदूषणलाई कम गराउने उद्देश्यले हालै रोड सेफ्टी एन्ड ट्राफिक एजुकेसन टाक्स फोर्स गठन गरेको छ । एनआरएनएको युकेका संस्थापक सदस्य, भूपू कोषाध्यक्ष, भूपू उपाध्यक्ष र एनआरएनए आईसीसीका पूर्वसदस्य समेत रहेका थर्क सेनको संयोजकत्वमा गठन भएको टाक्स फोर्सले आफ्नो अभियान सुरु गरिसकेको छ । स्याङ्जामा जन्मिएका संयोजक सेन भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक पनि हुन् । वान आर गोर्खा रेजिमेन्टको कम्युनिकेसनमा १६ वर्ष काम गरेपछि उनी बेलायतमा बस, ट्रक, कारलगायत अल क्याटोगरी चालकहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै आएका छन् । हालै उनले नेपालका उच्च अधिकारीहरुसमक्ष रोड सेफ्टी एन्ड ट्राफिक एजुकेसनसम्बन्धी प्रिजेन्टेसन दिएर फर्केका छन् । एनआरएनएले गठन गरेको रोड सेफ्टी एन्ड ट्राफिक एजुकेसन टाक्स फोर्सले के कस्तो काम गरिरहेको छ र नेपालमा दिएको प्रिजेन्टेसनको बारेमा संयोजक थर्क सेनसँग एभरेष्ट टाइम्सका लागि ‘घान्द्रुके कान्छा’ले गरेको कुराकानी ।
तपाई भर्खरै नेपालमा ट्राफिक सम्बन्धिन प्रिजेन्टेसन दिएर फर्कनुभयो, प्रशिक्षणको बारेमा जानकारी गराई दिनुहोस् न ?
पछिल्लो समय नेपालमा सवारी दुघर्टना, ट्राफिक जाम र सवारी प्रदूषणले ठूलो रुप लिँदै गएको छ । त्यसलाई कम गर्नका लागि एनआरएनएले मेरो संयोजकत्वमा ‘रोड सेफ्टी एन्ड ट्राफिक एजुकेसन टाक्स फोर्स’ गठन गरेको छ । सो फोर्स आफ्नो उद्देश्यअनुरुप अगाडि बढेको हो । जसलाई हालै मैले नेपालका विभिन्न सहरहरुमा प्रशिक्षण दिएर सुरुआत गरेको छु । यसपटक मैले काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, सिद्धार्थनगर भैरहवा र बुटवल नगरपालिकाका अधिकारीहरुलाई सवारी दुघर्टना, प्रदूषण र जामलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रिजेन्टेसन दिएर आएको छु । नगरपालिकाहरुमा मात्र होइन, सिंहदरबारमा रहेका नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई र यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, ट्राफिक हेडक्वार्टरमा समेत प्रशिक्षण दिने अवसर मिल्यो ।
प्रिजेन्टेसन कुन विषयमा केन्द्रित थियो ?
विशेषगरी मेरो प्रिजेन्टेसन सडकमा उड्ने धूलोलाई कसरी कम गर्ने, ट्राफिक जाम कसरी हटाउने र सवारी दुर्घटनालाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । त्यस्तै, पहिलो पटक प्रिजेन्टेसन दिएर आएलगतै दुई हप्तापछि फेरि नेपाल सरकारले आयोजना गरेको रोड सेफ्टीबारे नेसनल कन्फरेन्समा समेत पुनः प्रिजेन्टेसन दिएर आएको छु ।
नेसनल कन्फरेन्समा के–कस्ता विषयलाई उठान गर्नुभयो ?
मेरो प्रिजेन्टेसन नगरपालिका, ट्राफिक, यातायात र सिंहदरबारमा पहिलो पटक दिएजस्तै थियो, सवारी दुर्घटनालाई कसरी कम गर्ने ।
नेसनल कन्फरेन्समा के कस्ता व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ?
नेपाल सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रम भएकोले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट ८ जना रोड सेफ्टीका विज्ञहरु हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी, दातृसंस्थालगायत सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुको सहभागिता थियो ।
तपाईको प्रिजेन्टेसनले सवारी प्रदूषण, ट्राफिक जाम र दुर्घटनामा कमी ल्याउन सहयोग गर्ला ?
हामीले भनेको कुरा कार्यान्वयन गरेमा पक्कै पनि शतप्रतिशत सहयोग गर्छ । पहिलो कुरा त, मैले दिएको प्रिजेन्टेसनबाट उहाँहरुलाई प्रभाव परेको छ । र, मैले प्रस्तुत् गरेको मोडल भनेकै युके र युरोपको जस्तो हो । जुन यहाँ सफल भएको छ भने त्यहाँ पनि हुन्छ ।
युके र युरोपको मोडल भन्नुभयो, यहाँको जस्तो पूर्वाधार त नेपालमा छैन, कसरी सम्भव होला ?
यहाँको जस्तो पूर्वधार छैन तर भइरहेको सडकलाई माइनर करेक्सन गर्‍यो भने पक्कै पनि सुधार आउँछ । अर्को भनेको, सडक प्रयोगकर्ताहरु जस्तैः फुटपाथमा हिँड्ने बटुवा, साइकल यात्री, बस, ट्रक, कार र मोटरसाइकल चालकहरुलाई हाईवे कोड सिकाउनु पर्दछ । यहाँ पो स्कुलमै हाईवे कोड बारेमा पढाएको हुन्छ, नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । त्यसैले हामीले हाईवे कोडको बारेमा ‘युनिभर्सल हाईवे कोड, अल रोड युजर’ नाम गरेको एउटा सानो बुक तयार गरेका छौं । र, सबै सर्वसाधारणले ट्राफिकसम्बन्धी जानकारी लिन आवश्यक छ ।
त्यसैले हामीले नेपालमा रहेका १२ हजार ८०० वटा विद्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकायमा त्यो पुस्तक वितरण गर्दैछौं । जसले समस्यालाई समाधान गर्न ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास छ ।
बुककै आवश्यक किन पर्‍यो ?
एउटा बस चालकले दिनमा १००–२०० यात्रुको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । डाक्टरको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । तर, डाक्टरले आवश्यक अध्ययन पूरा गरेको हुन्छ भने चालकलाई न्यूनतम तालीमसमेत दिइएको हुँदैन । केवल ६ महिना हेल्पर गरेको भरमा चालकको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । उसलाई हाइवे कोडलगायत बारेमा त्यत्ति जानकारी हँुदैन । त्यसैले चालकहरुलाई पर्याप्त प्रशिक्षण जरुरी छ । उनीहरुलाई प्राक्टीकल र थेउरीटिकल रुपमा पढाउने र परीक्षा लिने व्यवस्था नगरिएसम्म दुर्घटनामा कमी आउने छैन । त्यही कुरालाई मध्यनजर राख्दै विद्यार्थी, बटुवादेखि चालक, ट्राफिक प्रहरी, यातायात विभाग, सडक विभागलगायत सबैलाई पुस्तक वितरण गर्न लागिएको हो ।
नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापनमा एनआरएनएले चासो लिइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको धारणा कस्तो पाउनु भयो ?
यसभन्दा अघि नै एनआरएनए र सरकारबीच एमओयु गर्ने भनिएको पनि थियो । तर, केही पेपरवर्क नमिलेका कारण अहिलेसम्म भएको छैन । र, सरकारले पनि आफ्नो कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । हाम्रो अर्को योजना भनेका,े एनआरएनए विल्डिङ्गमै ओपन युनिभर्सिटीको अवधारणाअनुसार एनआरएनए एकेडेमी सञ्चालन गर्ने र सो एकेडेमीमा विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने हो । त्यसैमा रोड सेफ्टीसम्बन्धी पनि कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ । त्यस्तै हामीले अर्को, रोड सेफ्टीको बारेमा टिभीमार्फत पनि जानकारी गराउन सकिन्छ । निष्कर्षमा भन्नु पर्दा नेपालको ट्राफिकसम्बन्धी समस्या जहाँको त्यही छ, सुधार एकदमै चाहिएको छ ।
दुर्घटना हुनुका कारणहरु के के भेट्नु भयो ?
मुख्य कारण भनेको, अज्ञानता नै हो । अज्ञानताकै कारण दुर्घटना हुने हो । उदारहणका लागि बाटोमा स्पीड लिमिटको बोर्ड देखिँदैन । उसलाई त्यो बाटोमा कुन गतिमा सवारी चलाउनु पर्ने हो जानकारी गराउनु पर्‍यो । सवारीसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिएर सक्षम बनाउनु पर्‍यो । अर्को कारण हो, बाटो । ब्याड इन्जिनिरिङ्गको कारण बाटोहरु अव्यवस्थित तरिकाले बनाइएको छ । त्यसलाई सामान्य सुधारमात्र गरियो भने व्यवस्थित हुन्छ । र, अर्को कारण भनेको रिफ्रेसमेन्ट । नेपालमा २० वर्षअघि ड्राइभिङ्ग पास गरेको चालकले अहिले पनि कुदाइरहेको छ । यसबीचमा थुप्रै ट्राफिक नियमहरु आइसकेका छन् । आधुनिक खालका सवारीहरु भित्रिएका छन् । त्यसैले हेभी चालकहरुलाई युकेकै जस्तो गरी केही वर्षको फरकमा पुनः टेस्ट लिनु पर्दछ । जसले हरेक चालकलाई रिफ्रेसमेन्ट बनाउँछ र दुर्घटनामा कमी ल्याउँछ ।
सरकारले के के गरिदिएमा तपाईहरुको योजना सफल हुन सक्छ ?
हाम्रो चाहना भनेको नेपालीले दुःख नपाओस्, अकालमा ज्यान नजाओस्, प्रदूषणबाट मुक्त होस् भन्ने नै हो । हामीले दिने सुझावलाई सरकारले गहन रुपमा लिनु पर्‍यो । विद्यालयस्तरमै ट्राफिक शिक्षा दिनु पर्‍यो । ड्राईभिङ्ग लाइसेन्स लिनका लागि यहाँको जस्तो मापदण्ड कायम गर्नुपर्‍यो । सरकारले यस क्षेत्रमा सुधार गर्छु भन्ने लागेमा पक्कै पनि सुधार हुन्छ । जस्तै, अहिले सरकारले नो हर्न र नो मापसेको नियम बाहिर ल्यायो, त्यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छ । त्यसैगरी हामीले दिएको सुझावलाई सरकारले मनन गरिदियो भने पक्कै पनि हाम्रो अभियानले सार्थकता पाउन सक्छ भन्ने विश्वास छ ।
तपाईहरुको योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले कुनै आर्थिक सहयोग गर्दैछ कि ?
हामी लिन गएको होइन, दिन गएका हौं । मैले दिएर आएको प्रिजेन्टेसन पूर्णरुपमा निःशुल्क हो र हामीले वितरण गर्न लागेको पुस्तक पनि निःशुल्क हो । त्यस्तै, आवश्यक लर्निङ्ग र टिचिङ्ग मेटिरियलहरु पनि निःशुल्क नै प्रदान गर्ने हो ।
दुई/दुई पटक प्रशिक्षण दिँदा सहभागीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भयो ?
सबैले बढो चासोका साथ हेर्नु भयो । विशेषगरी पोखरा र काठमाडौंका मेयरलाई भेट्दा उहाँहरु तालीम लिनका लागि एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयरज्यूले अब कहिले फर्कनु हुन्छ ? तालीम दिनु पर्छ भन्नु भएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंको मेयरलाई बस र साइकलको छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसबाट हुने फाइदाको बारेमा जानकारी गराउँदा धेरै सकारात्मक हुनु भएको छ । सरकारी अधिकारीहरु पनि धेरै सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा तपाई कहिलेदेखि हुनुहुन्छ ?
यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । यसभन्दा अघि पनि रोड सेफ्टी एन्ड ट्राफिक एजुकेसन टाक्स फोर्सको संयोजकको भूमिकामा थिएँ । तर, भूकम्पलगायतको कारणले खासै केही गर्न सकिएन । त्यतिबेला दुईपटक ट्राफिक हेडक्वार्टरमा पुगेको थिएँ भने मन्त्रालयमा समेत पुगे । तर, विविध कारणले यो अभियान अगाडि बढ्न सकेन । अहिलेको कार्यसमितिले फेरि पनि मलाई त्यही जिम्मेवारी दिएको छ । र, हामी अहिले तयारी अवस्थामा भएकै कारण अलि छिटो यस अभियानमा लागेका छौं ।
एनआरएनएको सञ्जाल विश्वका ७८ वटा देशमा फैलिएको छ, यतिधेरै देशबाट तपाईले नै यो जिम्मेवारी पाउनुको कारण ?
यी देशहरुमा यस विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु नभेटिएको पनि हुन सक्छ । अर्को, म यस टाक्स फोर्समा आउनुभन्दा पहिलादेखि नै नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमै थिएँ । र, अर्को भनेको प्रदूषण, जाम र दुर्घटनालाई कम गराउने खालको क्षमता भएको विश्वासिलो व्यक्ति भएर पनि हुनसक्छ ।
अभियानमा कति खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको छ ?
खर्च भनेकै बुक हो । हामीले एकदमै राम्रो क्वालिटीको अंग्रेजी र नेपाली भाषामा बुक निकाल्ने भएकोले एउटा बुकको ३०० रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । र, अनलाइन मेटिरियल मैले नै स्पोन्सर गरिरहेको छु । त्यसकारण त्यति धेरै खर्च देखिएको छैन । अर्को भनेको एकदमै धेरै दुर्घटना भइरहने मुग्लिनदेखि नौबिसे सडक खण्डमा एउटा रोड स्याम्पल प्रोजेक्ट सुरु गर्दैछौं । त्यसको सर्भे पनि भइसकेको छ । जसको लागत २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
अहिले नेपालीहरुले जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेको अवस्था छ । युकेमा जस्तो हेल्थ एन्ड सेफ्टीलाई विशेष ध्यान दिइएको पाइँदैन । एउटा नेपालीको हैसियत हाम्रै पालोमा युके जस्तै समृद्ध नेपाल देख्न पाइन्छ कि भन्ने पनि हो । यस्ता जोखिमलाई कम गर्नका लागि पहिलो कदमको रुपमा प्रिजेन्टेसन दिएर आएको छु । लगत्तै अब करिब १२ हजार थान पुस्तक छापिँदै छ । प्रति पुस्तकको २ पाउन्ड पर्न जान्छ । पुस्तकमा एनआरएनएको लोगो पनि राखिएको हुन्छ । जसले गर्दा एनआरएनको बारेमा धेरैलाई जानकारी पनि हुनेछ । सबै मिलेर अभियानमा जुट्यौं भने पक्कै पनि सफल हुन सकिन्छ । छोटोमा भन्नुपर्दा, पुस्तकको लागि स्पोन्सर गरिदिन हुन बेलायतलगायत देशविदेशमा बसोबास गर्नुहुने सबै नेपालीहरुमा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।